Wakiilka Gareth Bale oo ku tilmaamay inay tahay wax laga xishoodo go’aamada tababare Zidane – Gool FM
Wakiilka Gareth Bale oo ku tilmaamay inay tahay wax laga xishoodo go’aamada tababare Zidane
Dajiye May 12, 2019
(Real Madrid) 12 Maajo 2019. Jonathan Barnett oo ah wakiilka laacibka reer Weles iyo kooxda Real Madrid ee Gareth Bale, ayaa muujiyay sida uu kaga carooday in tababare Zinedine Zidane uu markii labaad ee xiriir ah ka saaray liiska kooxdiisa, kaddib markii uu ku dhawaaqay xidigaha Real Madrid ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee Real Sociedad.
Liiska rasmiga ah uu ku dhawaaqay tababare Zidane ayaa waxaa markii labaad ee xiriir ah laga dhex waayay xidiga reer Weles ee Gareth Bale, kaddib markii uu seegay kulankii lasoo dhaafay ee Villarreal, taasoo muujineysa inay xaqiiqo noqon karto wararka ku saabsan in kooxda laga fasixi doono marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo socda.
Hadaba wargeyska “Daily Star” ee dalka ayaa daabacay wareysi uu dhawaan bixiyay wakiilka Gareth Bale ee Jonathan Barnett, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waa wax laga xishoodo in Bale uusan ciyaarin, waxay ahayd in si fiican uu u soo muuqdo, kaddib markii uusan ciyaarin labadii kulan ee ugu dambeysay”.
“Waxaan rajeynayaa in Gareth Bale uu sii wadi doono u ciyaarista kooxda Real Madrid, balse go’aanka ugu dambeeya waxaa iska leh Zinedine Zidane”.
Jonathan Barnett ayaa la weydiiyay su’aal ahayd In ka saarista Gareth Bale ee liiska xidigaha kooxda Real Madrid, ay tahay fariin kahor suuqa kala iibsiga ee xagaaga wuxuuna ku jawaabay.
“Waa inaad weydiisaan tababaraha”.
Yeelkadeeda, Gareth Bale ayaa yimid kooxda Real Madrid xagaagii 2013, isagoo kaga soo dhaqaaqay Tottenham aduun lacageed dhan 85 milyan ginni, iyadoo heshiiska uu haatan ku joogo garoonka Santiago Bernabéu kaga harsan yahay 3 sano ee kale.
Gareth Bale ayaa haatan lala xiriirinayaa in markale uu dib ugu laaban doono horyaalka Premier League, gaar ahaan kooxda Manchester United.
Kooxda Juventus oo soo bandhigtay maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso fasal ciyaareedka cusub ee 2019/20... (MUUQAAL + SAWIRRO)
Shaxda rasmiga ah kulanka Premier League ee kooxaha Brighton Vs Manchester City